Hakan Çavuşoğlu iyo Wafdi uu hogaaminayo oo goordhaw soo gaaray Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ra’isul Wasaare ku-xigeenka dalka Turkiga, Hakan Çavuşoğlu iyo Wafdi balaaran uu hogaaminayo ayaa goordhaw kasoo degay garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Wafdigan waxaa garoonka Diyaaradaha kusoo dhaweeyay Masuuliyiin sar sare oo katirsan dowlada Soomaaliya, waxaana wafdigan sida aan wararka ku helnay loo galbiyay xarunta Madaxtooyada Soomaaliya.
Ra’isul Wasaare ku-xigeenka dalka Turkiga, Hakan Çavuşoğlu iyo wafdiga la socda ayaa la filayaa in ay la kulmaan Madaxda dalka ugu sareysa gaar ahaan Madaxweynaha iyo Ra’isul Wasaaraha.
Dowlada Turkuga ayaa taageero balaaran siisa Soomaaliya, waxaana Turkiga Mudisho ka furatay Safaarad aad u weyn waxa ay sidoo kale ka dhisatay saldhiga ugu weyn ee Turkigu ku leeyahya meel ka baxsan dalkiisa.